100 andro: nahavita dingana ny Praiminisitra Ntsay | NewsMada
100 andro: nahavita dingana ny Praiminisitra Ntsay
100 andro tamin’izao fiandohan’ny volana septambra izao ny nitantanan’ny Praiminisitra Ntsay Christian ny governemanta. Anisan’ny asa vitany ny namerina amin’ny laoniny ny fitoniana taorian’ireny krizy, nanomboka ny 21 avrily teo, ireny ka nisehoan’ny fidinana an-dalambe. Tonga amin’izao hirosoana amin’ny fifidianana izao izany na teo aza ireo hetsika sy fitakiana ny tsy hanaovana izany amin’ity taona ity. Nanome antoka sy toky ny sehatra iraisam-pirenena ny amin’ny hanaovana ny fifidianana ny 7 novambra izao koa ny tenany.
Fahaiza-mitarika sy mifampiraharaha
Teo ny fahaiza-mitarika nananany, nifampiraharahana amin’ireo sendikà nitarika hetsika teto. Nitana ny teny nomena ka nanome valiny manoloana ny fitakian’ny mpampianatra. Tsy tonga tany amin’ny taona fotsy ny fampianarana fa vita ny fanadinana.
Eo amin’ny tsy fandriampahalemana, efa mandeha ny paikady hiadiana amin’izany. Tafapetraka ny komitim-pirenena ho amin’ny filaminana anatiny (CNSI). Manampy ireo ny fidinana ifotony nataony amin’ny fametrahana fahefam-panjakana sy fanomezana toromarika ireo tompon’andraiki-panjakana hiady amin’ny tsy fandriampahalemana.
Tsy nataon’ny mpitondratao anatin’ny efa-taona…
Anisan’ny asa vitany koa ny fanaraha-maso ny fananam-panjakana ka nametahana sy nanovana ho takelaka mena ny nomeraon’ny fiaram-panjakana. Ny hanaovana tombana sy fanaraha-maso ny tranom-panjakana.
Ampahany ihany ireo nefa midika koa fa asa sy andraikitra tsy vitan’ny mpitondra tao anatin’ny efa-taona izao nirosoan’ny Praiminisitra Ntsay Christian tao anatin’ny 100 andro izao.